Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FDP si Nigeria & ụwa | TAA
Ndị Germany Social Democrats laghachiri na mmekọrịta ọnụ na Angela Merkel
Ndị Germany na Social Democrat Party (SPD) emeela ka ha kwadoro ka ha soro ndị nnọchiteanya Angela Merkel nọrọ na nhoputa nzipu ozi, dịka nkwupụta nke ndị otu ahụ kwuru.
Angela Merkel nke Germany na-egosi njikere maka nhoputa ndi ochichi ohuru mgbe okwu mmekorita dara
Onye Germany Chancellor Angela Merkel kwuru na ya ga - ahọrọ nhoputa ndi ochichi ohuru karia iso ndi ochichi na ndi mmadu mechaa mgbe ndi mmadu kwughariri okwu banyere imekorita ndi mmadu ndi mmadu.
Onye Germany German Chancellor Angela Merkel nwere nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Egwu na-emenye ụjọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Germany mgbe mkparịta ụka iji kwalite ọchịchị gọọmenti n'etiti anọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị omeiwu asaa ahụ dara n'ala obere oge tupu etiti abalị na Sunday.
Oge Crunch nye Angela Merkel iji wuo mmekọrịta ma ọ bụ ihu ọkwa ọhụrụ
Onye Germany Chancellor Angela Merkel maliteghachiri mmekorita mmekorita nke a na Saturday na Saturday n'osimiri ikpeazụ iji mee ka gọọmenti guzozie ma gbochie nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na oke akụ na ụba Europe.
Angela Merkel 'nabatara ndị gbara ọsọ ndụ' na ndị na-asụ Bavarian n'okwu mmekọ
Izu abuo mgbe o meriri ntuli aka na ndi ka adi ala, Onye isi ochichi Germany aha ya bu Angela Merkel rutere otu onwa Sunday iji weghachite ulo oru ya na ndi ozo na-acho ime ulo oru ohuru ohuru.
Ihe gbasara agbapụta na-eme ka Angela Merkel bidoro ịmalite ọchịchị
Izu abụọ mgbe o nwetasịrị ntuli aka na ọnụ ọgụgụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, German Chancellor Angela Merkel weere nzọụkwụ mbụ na Sunday iji mee ka gọọmenti site n'ịgbalị ịbikọ ọnụ ya nke na-enweghị nchebe bụ nke na-ekewapụrịrị iwu ndị gbara ọsọ ndụ.
Angela Merkel nke Germany kwadoro na ọ dị njikere ịchịkwa na freerals na elu
Onyeisi Germany bụ Angela Merkel kwadoro Saturday na ọ ga-amalite okwu na liberals na Gọọmenti iji gbalịa ịmepụta ọchịchị ọhụrụ mgbe ọ ga-emechi ntuli aka nke ọnwa gara aga.
Oghere na-adabere na AFD dịka aka nri dịka onye-ndú na-ahapụ ndị ọzọ
Onye isi na-edu ndú nke AfD (Alternative for Germany) nke na-adabereghị na 24 na-eme ka ndị mmadụ nọrọ karịa ụbọchị XNUMX mgbe ọnyà nke atọ na-akpata na ntuli aka mba ahụ.
Merkel isi maka mmeri nke ndị Germany, AfD siri ike maka oche mbụ
A na-atụ anya Chancellor Angela Merkel ka ọ na-aga ije na mmeri na nhoputa ndi nhoputa aka Sunday kamakwa iji chee ihu n 'ime nzuko omeiwu nke ndi populists siri ike maka oge mbu na akụkọ agha nke agha Germany.
Germany na-eme ntuli aka na nhoputa ndi isi obodo
Germany na-aga na nhoputa ndi ochichi na Sunday maka ntuli aka ndi isi obodo nke mba, tinyere onye isi ochichi Angela Merkel na-ele anya ma oburu na o merie onu ogugu nke ozo.
Manchester City na-adabere n'aha aha mgbe ejiri Tottenham egwu
Manchester City na-aga n'iru inweta mmeri nke Njikọ Premier ahụ mgbe ọ kwụsịchara nsogbu ha na 3-1 na-emeri Tottenham na Saturday.
Lagarde IMF na-adọ aka ná ntị megide imebi ahia, ego
N'ihe na-emekọrịta ihe na US-China na nzukọ ya kwa afọ, Fund International Monetary na Thursday dọrọ aka ná ntị ka ndị gọọmentị ghara izere ịzụ ahịa na itinye ego nke na-abụ ndị ọkwọ ụgbọala kachasị elu nke mgbake ụwa.
Joel Obi: Italy chọrọ ka m kpọọ ha
Joel Obi kwuru na ya gbanwere ohere igwu egwu n'Ịtali n'oge ọ bụ nwata ma chere maka oge ọ ga-anọchite anya Nigeria.
Senator Omo-Agege na-agọnahụ njedebe na izu ohi nke nwanyị na Senate
Senator Ovie Omo-Agege na mgbede Wednesday gosiri na ndị mgbasa ozi na ndị na-ahụ ihe ndekọ na-egosi na ọ bụ onye ohi nke nwanyị nke Senate Nigeria bụ eziokwu.
Mahadum Makerere Uganda kwụsịtụrụ ndị ọrụ maka ịlụ ọgụ nke mmekọahụ
Mahadum Makerere nke Uganda akwusila onye isi oru nhazi maka ebubo na o na-emekpa nwa akwukwo nwanyi n'ulo oru ya.
Ngbanwe mgbanwe window agaghị emetụta Man United - Mourinho
Ọnwụnwa nke Burkina Faso kpochapụrụ ndị gbara akwụkwọ ruo mgbe ebighị ebi
Osinbajo na-eme ka akụ na ụba ECOWAS maka ego maka ihe onwunwe, mmepe
General Babangida: Nwa okorobịa nọ na Nigeria ga-eduga mba ahụ na 2019
Cameroon na-achọ ịchụ nta maka ndị ọrụ ghost
2019: Adamawa SDP nsogbu na-emewanye dị ka guber na-atụ anya alleges witch-ichu nta